Mampiasa vola amin'ny fampiroboroboana entana ve ianao? | Martech Zone
Alakamisy, Septambra 20, 2012 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Ny faran'ny herinandro lasa teo dia nasain'ny ekipa tao amin'ny Paikady momba ny tranokala ho eo amin'ny azy ireo Edge of the Web radio show ary hiresaka amin'ireo mpianatra sasany momba ny Serasera Vaovao izay nidina avy tao amin'ny IU Kokomo mba hiresaka aminay. Hetsika mahafinaritra io ary feno hafanam-po ireo mpianatra ary nametraka fanontaniana an-taonina maro - tsy momba ny media vaovao fotsiny fa momba ny orinasa iray manontolo. Nampahery tokoa ny nahita ny hafanam-pony sahady.
Rehefa mandeha amin'ireo hetsika ireo aho dia manandrana mitondra karazana zavatra fampiroboroboana foana. Tamin'ity indray mitoraka ity dia nitondra kapila USB 4Gb sasany aho DK New Media efa nataon'i by ePromos.
Tonga tampoka ny kapila fampandehanana USB ary taorian'ny nahitan'ny mpianatra roa azy ireo dia nanana mpianatra marobe nanodidina ahy aho. Tian'ny olona ny fampiroboroboana… indrindra rehefa mahasoa izy ireo. Toy ny marketing rehetra, misy vola lafo lany ary vola ratsy lany. Ny USB drive dia tsy lafo loatra, indrindra rehefa 4Gb izy ireo :). Na izany aza, amin'ny fanomezana fanomezana fanentanana sarobidy, dia manome fahatsapana kalitao sy fanavahana izay tianay ny olona hifanerasera amin'ny orinasanay.
Aza mikimpy amin'ny zavatra fampiroboroboana. Mety ho famantarana amin'ny vinavinanao fa ianao ilay karazana mpivarotra izay hanadino azy ireo!
Momba ny ePromos: Nanafatra indray aho avy amin'ny ePromos indroa izao ary tena mankasitraka ny serivisy sy ny sorona omen'izy ireo. Natao pirinty tsara ireo kapila, naseho ara-potoana ary voaangona tsara, ary nanana fihenam-bidy lehibe tokoa izy ireo. Ny zavatra iray hafa ankasitrahako amin'ny ePromos dia ny fandefasan'izy ireo ny mailaka "Time to Re-order" iray volana eo ho eo aorian'ny andefasanao entana iray miaraka amina fihenam-bidy. Fampatsiahivana lehibe io mba hijerena ny famatsiana ireo entana fampiroboroboana sy ny fandaminana indray rehefa ilaina izany!
Tags: epromosentana fampiroboroboana hetsikafisondrotanaentana fampiroboroboanaschwagkapila USB
e-Famakiana eo am-piakarana
Jan 24, 2014 ao amin'ny 2: 09 AM
Ny fanomezana notohanana dia hanangana tontolom-piavaka amin'ny fivarotana satria mitazona azy ireo mandritra ny fotoana maharitra ny mpanjifa fa tsy manary azy ireo na tsy miraharaha azy ireo toy ny dokam-barotra hafa.